Nyanzvi dzinoshanda mubazi reDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe dzatanga kuramwa mabasa zvichitevera kumbomiswa basa kwakaitwa vamwe vavo vaviri vanoti; Dr. Bothwell Mbuvayesango, naDr. David Chimuka, vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vana chiremba vadiki kusaenda kubasa.
Vanachiremba vanoita zvekuvhiya varwere vadzidzisa muDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe vazivisa vakuru vechikoro ichi kuti vakanda mapadza avo pasi sezvo vasiri kufara nekumbomiswa basa kwaDr. Mbuvayesango naDr. Chimuka.
Vana chiremba ava vati havasi kuzodzekeri kubasa kana vaviri ava vasina kudzorerwa pabasa ravo vachiti vese vakabatana pakuramwa mabasa nekudaro havaoni chikonzero chekuti vaviri ava vadzingwe.
Vanachiremba ava vatiwo havasi kufara nemari dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara umo vanoti hamuna zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Kuramwa mabasa kwaitwa navana chiremba ava kunorevawo kuti varwere vakawanda vanenge vachida kuoparetwa, havachaoparetwi sezvo nyanzvi dzekuDepartment of Surgery, dzanga dzichibatsira zvikuru mukuvhiya varwere muzvipatara zvehurumende.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kudivi reUniversity of Zimbabwe kuti vangani vana chiremba vanoshanda mubazi reDepartment of Surgery.
Vanachiremba vakuru vakabatana nanachiremba vadiki avo vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa avo.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr, Henry Madzorera, vati vavhundutswa zvikuru nezvaitwa neUniversity of Zimbabwe.
Dr. Madzorera vati zvaitwa izvi zvinoshoresa nyika sezvo vadzingwa ava dziri nyanzvi munezveutano
VaMadzorera vatiwo zano ravangangopa kubazi rezveutano nderekuti riite hurukuro nevaachiremba, rovapawo mari inoita kuti vakwanise kurarama.
VaMadzorera, avo vanoshandira muguta reKwekwe, vatiwo vanachiremba vari muKwekwe havasi kushanda izvo zviri kupa kuti vamwe varwere varasikirwe nehupenyu.
Kusaenda kumabasa kwavanachiremba uku kwakonzera kusamira zvakanaka muzvipatara zvehurumende umo varwere vasiri kurapwa, uye vamwe vachiburitswa muzvipatara izvi vasati vapora.
VaJoelson Mugari, avo vanoti vakaenda kuchipatara nehama yavo yanga yaita tsaona, vati havasisina tarisiro nezvipatara zvehurumende sezvo vanhu vasiri kuwana rubatsiro.
Hurumende yakawedzera vanachiremba mari nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi vana chiremba vanoti mari iyi haina zvainobatsira sezvo zvinhu munyika zvakaita semafuta edzimotokari, magetsi, mari dzemba, zvekudya nezvimwe zviri kukwira mitengo yazvo zvakanyanyisa zuva nezuva.
Health Services Board yakaendesa vana chiremba ava kudare reLabor Court, iro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi nemusi weChina.